Saika voa daholo ny olon-dehibe sy ny ankizy madinika, karazan’aretina izay nambaran’ny dokotera Fidy Bariniaina fa mora mifindra tokoa ka ilana fitandremana be. Miseho amin’ny alalan’ny maso mivoaramena, mangirifiry ary mamoaka ranomaso madity izany. Mamoaka taimaso be ihany koa ilay maso ka ireny karazan-javatra mivoaka ao aminy ireny ihany dia efa ampy hanaparitaka ilay mikraoba raha tsy mitandrina ilay tompony. Ny fanasana tanana amin’ny savony ihany no vahaolana haingana iadiana amin’ny areti-maso tsy hiparitaka ankoatra ny fanatonana dokotera hahafahana mitsabo izany, hoy hatrany ity dokotera ity. Nomarihiny fa mikraoba no mahatonga ny areti-maso ka tafiditra ao ny loto.